Jawaari: Golaha baarlamanka Soomaaliya ma aqabali karo dhaqanka Kenya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Jawaari: Golaha baarlamanka Soomaaliya ma aqabali karo dhaqanka Kenya * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame on 26th April 2014
Muqdisho – Mareeg.com: Gudoomiyaha baarlaamanka Soomaaliya, Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa maanta 26/4/2014 si kulul uga hadlay xarig ciidamada booliska Kenya magaalada Nairobi ugu geysteen dublaamis ka tirsan safaaradda Soomaaliya.
Jawaari oo manta ha hadlay kulanka baarlamaanka Soomaaliya ayaa xadgudub ku tilmaamay xari qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Nairobi u geysteen ciidamada booliska, isagoo weliba tusay dukumiintigiisa.
“Booliska inta uu qabtay qunsulka Soomaaliyeed ee Kenya ayay ku dhex dareen gaarigii ay saarnaayeen dadka sharci darrada ahaa, waxa uu tusay diblomaasiyadda, way aqoonsan waayeen, way xireen iyagoo aan tixgelin jagada uu hayo, xitaa safiirkii oo la socday way aqoonsan waayeen oo ciidanka tusay in uu yahay qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Kenya” ayuu yiri Prof. Jawaari.
Prof. Jawaari ayaa xukuumadda Soomaaliya ka dalbaday iney jawaab rasmi ah ka bixiso dhaqanka ciidamada Kenya iyo xadgudubka ay u geysteen Soomaaliya.
“Arintaan ma ahan oo kaliya mid xad gudub ku ah sharciga diblomaasiyiinta caalamka ee la isku ixtiraamo, ee waxaan u aragnaa mid xadgudub ah, arintaan goluhu uma dul qaadan karo, waxaan xukuumadda ka rabnaa in ay jawaab cad ka bixiso arrintaasi” ayuu markale hadalkiisa ku daray guddoomiyaha baarlamaanka Prof. Jawaari.
Ciidamada Kenya oo weli qabqabasho ku haya dadka Soomaalida ah ayaa xabsiga dhigay qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Nairobi Mr. Shire, inkasoot saacado kadib ay sii daayeen.